Mouse ကို Disable ဖြစ်သွားစေမယ့် Virus ကုဒ်လေး ရေးကြည့်ရအောင်
Posted by ကိုဆက် ကြီး on August 11, 2013
မောက်စ်ကို လှုပ်ရှားလို့ မရတော့တဲ့ အခြေအနေ Disable ဖြစ်သွားအောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့် batch code
လေး ဖြစ်ပါတယ်။ Notepad ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ အောက်ပါကုဒ်လေးတွေကို ကူးပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် virus.bat ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ Save ပါမယ်။ Save as Type ဆိုတဲ့ နေရာမှာ All Files ကိုရွေး
ကဲ! Virus တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီးသွားပြီနော်၊ ကိုယ့်စက်မှာ သွား မ run နဲ့ဦး၊ ေိခိ ! :D